PSJTV | गुल्मी पहिरो : बारीको लोभले गयो एकै गाउँका ८ जनाको ज्यान
गुल्मी पहिरो : बारीको लोभले गयो एकै गाउँका ८ जनाको ज्यान
गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका ४ लिम्घा भीरकुनामा माथिपट्टि जंगल छ। फेदीमा बस्तीसहितको खेती गर्ने जग्गाजमिन छ। जमिन नै प्रमुख आयस्रोत भएको भीरकुनामा ८१ मध्ये ७५ घर दलित छन्। ७ असार बिहानै जंगलेका फेदीबाट बग्दै गाउँ पसेको पहिरोले घर बगाएपछि ८ जनाको ज्यान गयो।
भीरकुनामा पहिरो गएको पहिलोपल्ट भने होइन। ०१८ को पहिरोमा केही घर क्षतिग्रस्त भएका थिए। घटना दिउँसो भएकाले त्यतिबेला मानवीय क्षति हुन नपाए पनि जोखिम कायमै थियो। ०३५/३६ तिर बस्ती अन्यत्रै सार्न पञ्चायतकालीन जनप्रतिनिधिले छलफल चलाए।
पूर्वगाविस अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीका अनुसार बस्ती स्थानान्तरणको प्रयासमा स्थानीय समुदायलाई नै राजी गराउन सकिएन।
शाही भन्छन्, ‘धेरैको पर्याप्त बारी छ। त्यसैमा उनीहरू आश्रित भएकाले अन्यत्र गएपछि यहाँ भएजत्तिको जग्गा पाइँदैन भनेरै सर्नै मानेनन्।’ याे खबर आज प्रकाशित नेपाल साप्ताहिकमा घनश्याम गाैतमले लेखेका हुन्।
त्यसको परिणमा अहिले एकै गाउँबाट ८ जना महिला र बालबालिकाले ज्यान गुमाए। सत्यवतीकै वडा ३ ठूलो लुम्पेकको सिङ्दीमा पनि पहिरोमा परेर पाँच जनाले ज्यान गुमाए। सिङ्दी गाउँमा २६ परिवारको बसोबास छ।
विश्वकै प्रभावशाली महिला बोनिता शर्मालाई प्रश्न : तपाईं यो स्थानमा के तागतले पुग्नुभयो?
म्यान्माबाट नेपाललाई बुद्धका ३० मूर्ति प्रदान
यसो भन्छन् हत्या आरोपी आलमका भाइ
आलम अपराध : मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि १२ वषदेखि गोप्य
महरा प्रकरण : रोशनीको फेसबुक कसले अपडेट गरिरहेको छ?
म युट्युबरलाई पत्रकार मान्दिनँ
19th Aug 2019 पिएसजे न्युज
प्रशोधित दूधको मूल्य मौसमका आधारमा दुईथरी कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले आइतबार दूधको मूल्य सिफारिस गरेको गरेको हो। दूध बढी उत्पादन हुने र ...
काठमाडौं : विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले काठमाडौँ उपत्यका डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ । डब्लूएचओ विशेषज्ञहरूको टोलीले नमुना सङ्कलन गरी गरेको अध्ययनपछि यो जानकारी आएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी ...
27th Aug 2019 पिएसजे न्युज
दुई दिदी र एक दाजुकी कान्छी बहिनी गोमा कार्की एसईई दिएर बसेकी थिइन् । चम्पादेवी गाउँपालिका–१० ओखलढुंगाकी १६ वर्षीया उनको परीक्षाफल प्रकाशित हुन एक साता मात्र बाँकी थियो। गत असार ६ गते उनलाई ...